Waa maxay cabirka lagu taliyay ee kaarka ganacsiga? | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Design Graphic, Khayraadka
In kastoo maanta dijitaalka ay umuuqato waxa kaliya ee muhiimka ah, kaararka ganacsigu wuxuu sii wadaa inuu noqdo mid waxtar badan si uu kuu baro macaamiisha cusub iyo la-hawlgalayaasha. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka caawiyaan gudbinta sawirka iyo fariinta shirkadda. AMAn nashqad wanaagsan, waxay ka dhigi kartaa qofka aad siisay inuu xiiseeyo wixii aad si fudud ugu bixiso maxaa yeelay waxaad u gudbineysaa sawir xirfad leh oo waafaqsan waxa aad ku wacdineyso shirkad ahaan.Sidaa darteed, aad ayey muhiim u tahay in si taxaddar leh loo daryeelo faahfaahin kasta illaa milimitirka: midabka, nooca qoraalka, qaabka iyo, dabcan, cabbirka. Mashruucan waxaan ku siineynaa fikrado fikrad ah oo ku saabsan waxa uu yahay cabirka lagu taliyay ee kaarka ganacsiga si aad u dooran karto qaabka kuugu habboon adiga.
1 Tilmaamaha cabirka kaararka ganacsiga
1.1 Cabirka caadiga ah
1.2 Xallinta, qaabka midabka iyo cabirka pixels
2 Cabirro iyo qaabab kale
2.1 Kaararka ganacsiga ee taagan
2.2 Kaararka ganacsiga laba jibbaaran
2.3 Kaararka yar-yar
2.4 Kaararka isku laaban
2.5 Kaararka ganacsiga ee geesaha wareegsan
3 Qaab noocee ah ayaan u keydsanayaa kaarka ganacsiga?
Tilmaamaha cabirka kaararka ganacsiga
Cabirka caadiga ah
Ma jiraa cabir caadi ah oo loogu talagalay kaararka ganacsiga? Spain gudaheeda waxaan tixgelinaynaa taas cabirka caadiga ah ee kaararka ganacsiga waa 85 x 55 mm, maadaama ay tahay tan ugu badan ee laga isticmaalo Boqortooyada Ingiriiska iyo Galbeedka Yurub.
Si kastaba ha noqotee, iyo inkasta oo ay umuuqato waalli, cabirkan caadiga ahi wuu kala duwanaan karaa iyadoo kuxiran dalka. Tusaale ahaan, Maraykanka iyo Kanada waa wax iska caadi ah inay yeeshaan cabbir dhan 88,9 x 50,8 mm. Ruushka iyo inta badan wadamada Latin Amerika badiyaa waxay yihiin 90 x 50 mm. Jabbaan, waxa ugu caansan waa inay leeyihiin cabirro dhan 91 x 55 mm.
Xallinta, qaabka midabka iyo cabirka pixels
Haddii aad ku shaqeyso barnaamijyada nashqadeynta, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ogaato waxay noqon doonto cabbirka kaarka ee pixels, waa maxay xallinta ku habboon iyo nooca midab ee ay tahay inaad ku shaqeyso.
Cabbirka pixels wuxuu si cad ugu xirnaan doonaa cabirka kaarka, sawirka kore waxaan idiinka tegayaa soo koobitaan kooda oo u dhigma naqshadaha kala duwan. Cabirka kaararka Mareykanka iyo Kanadiyaanka (88.9 x 50.8 mm) waa 1050 px x 600 px. Heerka Yurub iyo Ingiriiska badiyaa waa cabir ka mid ah 1038 x ppm X XUMAY.
Maaddaama kaararka ganacsiga loo qaabeeyey daabacaadda waxaa muhiim ah inaad xusuusato inaad la shaqeyso iyol Qaabka midabka CMYK, oo aan la socon RGB, taas oo ah waxa aan inta badan isticmaalno markaan naqshadeynayno webka. Ugu dambeyntii, waxaa lagugula talinayaa inaad hagaajiso xalinta 300 dpi natiijooyinka ugu wanaagsan.
Cabirro iyo qaabab kale
In kastoo, sidaad horayba u aragtay, ay jiraan cabirro cayiman oo cayiman, kaararka qaabdhismeedka caadiga ah ma ahan kuwa kaliya ee suuqa laga heli karo waxaana jira kuwa doorta nashqado geesinimo iyo hal abuur badan.
Kaararka ganacsiga ee taagan
Kaararka ganacsiga badanaa waxay raacaan qaab jiif ah. Si kastaba ha noqotee, tani qasab maahan. Doorashada kaarka ganacsiga ee taagan wuxuu kaa dhigi karaa inaad ka soocnaato inta kale. Intaa waxaa dheer, waxay yihiin bilic ahaan aad u soo jiidasho badan.
Kaararka ganacsiga laba jibbaaran
Ayaa yidhi kaararka ganacsiga waa inay ahaadaan afargeesle? Naqshadeynta laba jibbaaran ayaa aad moodadaIyagu waa xarrago waxayna siiyaan taabasho casri ah wax sida caadiga ah kaarka u ah. Maxaa intaa ka badan, Haddii aad rabto inaad ka soocdo naftaada inta kale, qaabkani xitaa wuu ka sahlanaan doonaa qaabka toosan, maxaa yeelay qaabka gebi ahaanba wuu ka duwan yahay. Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad ku sugan tahay shirweyne ama carwo, dhacdooyinkan waa wax iska caadi ah in la beddelo kaararka, haddii qofku jeebkiisa ku haysto 20 kaar oo kaararkaas oo keliya kaagu waa afargeesle, waa wax aan macquul aheyn in lagu dhex arko kuwa afar geeslaha ah.
Ma waxaad raadineysaa wax ka yar kaarka cabbirka caadiga ah? Ikhtiyaarkan ayaa laga yaabaa inuu ku xiiseeyo, kaararka yar-yar ee lagu bixiyo suuqa, badiyaa waxay leeyihiin cidhiidhi iyo dherer, leylin, iyo Waxay qiyaasaan qiyaastii inta udhaxeysa 70 x 28 mm iyo 85 x 25 mm.
Kaararka isku laaban
Naqshadeyntaani waa mid hagaagsan haddii aad u baahato meel dheeraad ah oo loogu daro macluumaad faahfaahsan. In kasta oo ay tahay kaar xoogaa weyn, haddana wuxuu si fiican ula jaan qaadayaa cabbirka jeebka ama jeebka maxaa yeelay laba ayuu u laaban yahay.
Kaararka ganacsiga ee geesaha wareegsan
Kaararkaani waxay leeyihiin faa iido weyn waana in, iyagoo leh geesaha wareegsan, geesaha ma foorarsadaan oo way fududahay in markasta lala socdo adigoon waxyeello u geysan. Waxaad ku dabaqi kartaa qaabkan nooc kasta oo naqshad iyo cabbir ah oo aan hore uga soo hadalnay.
Qaab noocee ah ayaan u keydsanayaa kaarka ganacsiga?
Tani dhab ahaan waxay ku xirnaan doontaa halka aad ku daabacayso. Madbacadaha oo dhami ma aqbalaan qaabab isku mid ah. Waxaan kugula talinayaa adiga markaad daabacayso daabac faylka ku soo gal .pdf, laakiin maxaa ha ka takhalusin feylka wax laga beddeli karo asalka ah (.ai, .psd, .idd), haddii ay dhacdo inaad isbedel sameyso ama ay dhacdo in lagaa codsado inaad u dhoofiso qaab kale.
Sharaxaadyadan ka dib waxaad diyaar u tahay inaad hesho naqshadda saxda ah, laakiin waxaan halkan kaaga tagayaa xoogaa talooyin wax ku ool ah oo wax ku ool ah si aad adigu u awooddo samee kaar ganacsi oo kaamil ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waa maxay cabirka lagu taliyay ee kaarka ganacsiga?